iPhone 14 Pro र 14 Pro Max को नयाँ स्क्रिन साइजको विवरण आईफोन समाचार
iPhone 14 Pro र 14 Pro Max को नयाँ स्क्रिन साइजको विवरण
परी गोन्जालेज | 11/05/2022 10:00 | आईफोन 14
को अफवाहहरू iPhone 14 को नयाँ डिजाइनहरू दिनको क्रम हो। टोन सामान्य छ: एप्पल बाहेक निरन्तर डिजाइनको साथ उपकरणहरू सुरू गर्न चाहन्छ आईफोन 14 प्रो र प्रो म्याक्समा नच हटाउने। अन्तमा, ठूलो स्याउले तेस्रो रियर क्यामेरा भन्दा बाहिर 'प्रो' मोडेलहरूमा भिन्नता बनाउन गइरहेको छ। र यसलाई मार्फत बनाउँछ अगाडि एउटा नयाँ गोली आकारको डिजाइन। केही घन्टा अघि, एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो जहाँ यी प्रो मोडलहरूको स्क्रिन साइजहरू नच बिना लीक गरिएको थियो र हामीले त्यो देख्छौं। आकार उल्लेखनीय रूपमा बढ्दैन तर कार्यात्मक स्तरमा यो स्पष्ट छ कि त्यहाँ परिवर्तनहरू हुनेछन्।
iPhone 14 Pro र Pro Max स्क्रिन आकारहरूमा थोरै परिवर्तनहरू
नयाँ आईफोन 14 सेप्टेम्बरमा आउनेछ। त्यतिन्जेलसम्म, हामीसँग चुहावट, अफवाह र अवधारणाहरूको आधारमा अझै लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ जुन रूपरेखा हुनेछ, अझ पनि, एप्पलको स्मार्टफोनको भविष्य। अहिलेसम्म हामीलाई के स्पष्ट छ iPhone 14 ले आंशिक चक्र परिवर्तन सुरु गर्न गइरहेको छ प्रो टर्मिनलहरूको निशान हटाउँदै।
मैले पहिले भनेझैं, एप्पलले निर्णय गरेको छ आईफोन X मा पहिलो पटक देखा परेको निशान हटाउनुहोस् iPhone 14 Pro र iPhone 14 Pro Max को। यससँग, ठूलो स्याउले मानक संस्करण र म्याक्सको सन्दर्भमा डिजाइन स्तरमा ठूलो फरक पार्छ। तर पनि, निशानले अभिवादन गर्न अलविदा भन्छ नयाँ 'प्वाल + पिल' आकारको डिजाइन। यो नयाँ डिजाइन थोरै स्क्रिन आकार बढाउँछ.
iPhone 14 Pro सँग iPhone 13 भन्दा धेरै गोलो डिजाइन हुनेछ
विश्लेषक द्वारा प्रदान गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार रस युवा उनको ट्विटर खातामा यी आयामहरू हुनेछन्:
यदि हामीले यी आकारहरूलाई हालको पुस्ताको iPhone 13 Pro र Pro Max को नचसँग तुलना गर्छौं भने, हामीले देख्छौं कि स्क्रिनको आयामहरू बीचमा कुनै ठूलो परिवर्तन भएको छैन:
त्यो पनि याद गरौं iPhone 14 बेजेलहरू थप गोलाकार र साँघुरो हुनेछन्। यद्यपि यसले प्यानलको आयाममा ठूलो परिवर्तन उत्पन्न गर्दैन, भिजुअल स्तरमा यसले ठूलो परिवर्तन प्रिन्ट गर्न सक्छ जसले यन्त्रहरू ठूलो देखिन्छ। अब आईफोन 14 प्रो र प्रो म्याक्सको स्क्रिनमा भएको वृद्धिले एप्पललाई दिने सफ्टवेयर स्तरमा स्क्रिनको सम्भावनाहरूको बारेमा डिग्रेसन गर्ने समय आएको छ। के हामीले अन्ततः स्थिति पट्टीमा यसको आइकनको छेउमा ब्याट्री प्रतिशत देख्नेछौं? आफ्नो दांव राख्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन टर्मिनलहरू » आईफोन 14 » iPhone 14 Pro र 14 Pro Max को नयाँ स्क्रिन साइजको विवरण
पोडकास्ट 13x31: iPod लाई अलविदा, iPhone दीर्घायु होस्
Apple ले AirPods, AirPods Pro र AirPods Max अपडेट गर्दछ